Farafangana Reny teraka kambana 4
Fahasoavana efatra sosona no azon’ny renim-pianakaviana iray, tao Farafangana. Teraka kambana efatra mantsy ity reny ity, tao amin’ny hopitaly CHRR Farafangana hatrany.
Vavikely miisa telo miampy lahy kely iray ny zazakely azon’ity renim-pianakaviana ity, rehefa nitondra azy ireo nandritra ny 9 volana. Salama tsara avokoa ireo zazakely miisa 4 mianadahy vao teraka ary toy izany ihany koa ny reniny. Afak’omaly talata no niteraka soa aman-tsara ity reny ity ary hatramin’ny omaly dia mbola arahi-maso ao amin’ny hopitaly ny fahasalaman’izy 5 mianaka kely.